विवाह गर्न लागेकी दीपिका किन डराउछिन यस्तो कुरा सँग ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodविवाह गर्न लागेकी दीपिका किन डराउछिन यस्तो कुरा सँग !
बलिउडमा यति बेला अभिनेत्री दीपिका पादूकोण र अभिनेता रणवीर सिंहको चर्चा निकै भइरहेको छ कारण यी दुईको विवाह । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेकी दीपिका जसको करियर पनि निकै माथि रहेको छ । तर केहि बर्ष पहिला यिनी डिप्रेसनको शिकार बनेकि थिन । फाइन्डिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन’ विषयमा आधारित एक इभेन्टमा एकपटक दीपिकाले आफ्नो डिप्रेशन याद गर्दै डिप्रेशनका सबै कुराहरु अर्कालाई शेयर गर्दा मेरो जिन्दगी बद्लियो ।उनले भनिन एक बिहान अचानक मैले केही रित्तो महसुस गरें ।
म दिनभर सेटमा काम गर्थे र राति आएर घरमा रोएर बस्दथे । मेरी आमाले मेरो पीडा सबैभन्दा पहिले थाहा पाइन् र उनले उपचार गराइन् । र, म डिप्रेशनदेखि अत्यधिक डराउँछु । सोही कार्यक्रम मार्फत अभिनेत्री दीपिका पादूकोणले डिप्रेशनसँग लड्न र डिप्रेसनको सामना गर्न अरुलाइ जागरुक समेत गरेकी थिइन् ।